Kordhi Duulimaadyada Duulimaadyada Gobollada Bari iyo Koonfur-Bari | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia21 DiyarbakirKordhi Duulimaadyada Duullimaadyada Bariga iyo Koonfur-Bari ee gobollada Anatolian
21 / 01 / 2020 21 Diyarbakir, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, TURKEY
Kordhin duullimaadyada gobollada Bari iyo Koonfur-bari ee Anatolian
Bayaan ay si wada jir ah u soo saareen Isweydaarsiga Badeecadaha Diyarbakır (DTB) iyo Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Diyarbakır (DTSO) sababtuna tahay tirada duullimaadyada oo aan ku filnayn ayaa tagaya gobollada Bari iyo Koonfur-bari ee Anatolian. Bayaanka ayaa lagu sheegay in duullimaadyada ay ku tagayaan gobollada bariga iyo Koonfur-bari ee Anatolian aysan ku filneyn waxaana loogu yeeray kordhin.
Bayaanka ay soo saareen DTB iyo DTSO; Waxay shaacisay in duullimaadyada 24 Boeing 737 MAX ee duullimaadyada THY la joojiyay illaa amar labaad illaa 13-kii Maarso 2019 ay soo saartay shirkadda Duulista Hawada ee Turkishka iyadoo ujeedkeedu yahay badbaadinta duullimaadyada iyo badbaadada rakaabka. Markii la qaatay go'aankan, xayiraad ayaa laga saaray duullimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ahba, waxaana yaraaday tirada duullimaadyada maalinlaha ah ee gobollada badan.
Si kastaba ha noqotee, iyada oo la raacayo qaab aan habboonayn marka la qorsheynayo duullimaadyada duullimaadyada gudaha, tirada duullimaadyada ee Bariga iyo Koonfur-Bari ee Anatolia Region ayaa la yareeyey in ka badan gobollada kale ee Anatolia
Cilmi-baarisyadii aan sameynay, natiijooyinka soo socda ayaa laga helay.
Gobollo badan, 10-30% xayiraad ayaa lagu dabaqaa duullimaadyada diyaaradaha ee THY iyo Anadolu, halka saamigan lagu xadiday 50-60% gobolka.
Duullimaadyada maalinlaha ah ee taga Ankara ee ka imanaya gobollo badan ayaa hoos loo dhigay maalmo yar usbuucii.
Waxay noqotay wax aan macquul aheyn in la helo tikidhada duulimaadka ee ka hooseeya 400,00 TL.
CIP-ga wuxuu ku yaalliin garoomada casriga ah ee lagu dhisay tilmaamaha madaxweynahaaga iyo qalabkii gudaha ku jirayba wuxuu bilaabey inuu qudhmo maadaama aan lagu shubin.
In badan oo ka mid ah gobolladeena, waxay noqotay wax aan macquul aheyn in la helo tikidhada duulista usbuuc ka hor, waxaana la isku dayay in loogu safro gobollada ku teedsan iyada oo laga soo raaco garoonka diyaaradaha ee ugu dhow.
Aaska aabeheena ku dhintay gobolada galbeedka waxaa lagu aasi karaa iyadoo la sugayo dhowr maalmood maadaama tigidhada diyaaradda aysan ka heli karin eheladooda.
Booqashooyinka dalxiiska gudaha ee diyaaradda ayaa joogsaday.
Nasiib darrose, codsiyadeennii ballanta ee ka yimid Maareeyaha Guud ee THY ee arrintan ku saabsan lama helin.
Dhammaan xogta rasmiga ah iyo tan sayniska waxay muujinayaan in gobolkeennu uu heerkiisu hooseeyo marka la barbar dhigo gobollada kale marka loo eego horumarka. Hase yeeshee, annaga oo ah dadka ganacsatada ah ee gobolkayaga, ayaanan waligood naga go'in go'aankii aan ku qaadnay horumarka waddankeena iyo kan gobolka heer aad u sareeya. Dadaalkeenna ah inaan ku hawl galno hantida taariikhiga ah iyo tan dhaqameed ee gobolkeenna anagoo door bidnay waaxda dalxiiska oo aan gacan ka geysanno horumarinta dhaqaalaha dalkeenna iyo gobolkeenu sii socdo. Iyada oo ay sabab u tahay nabada iyo nabadgelyada deegaanka ee laga helay gobolka iyo dadaalkayaga shirkadeed, horumarinno muhiim ah ayaa bilaabay in ay ka dhacaan waaxda dalxiiska. Sida laga arki karo xogta TURKSTAT, waxaa labanlaabmay tirada dadka dalxiisayaasha ah ee gudaha iyo dibedda ku booqanaya xarumaha gobolka marka la barbar dhigo sanadihii hore.
In kasta oo korodhkani la rajaynayo inuu ku sii socdo xawaare aad u xawli ah sannadaha soo socda, waxaan u aragnaa Agaasimaha Guud ee THY inuu yareeyo tirada duullimaadyada ku tagaya gobollada gobolka oo ah dhaqan aan la aqbali karin. Waxaa muhiim u ah horumarka dalkeenna iyo gobolkeenna si loo kordhiyo duullimaadyada duullimaadyada ee gobollada iyadoo dib loo eegayo barnaamijyada duulimaadka hadda socda. ”
Si dhakhso ah u tababar si aad u tagto Gobollada Bariga
Duulimaadka Bariga iyo Koonfur-bari ee kale
Koonfur-bari Anatolia waxaa lala xiriirinayaa Istanbula YHT
Tareenka ayaa u socdaalay koonfurta bari
Duullimaadyada diyaaradaha ee Diyarbakir Anatolian
Isweydaarsiga Badeecadaha Diyarbakır
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Diyarbakir
Jadwalka Duulista Gobollada Koonfur-Bari ee Anatolian